Manome fitaovam-pitsaboana bebe kokoa ny tafika sinoa hanampiana an'i Laos hiady amin'ny COVID-19
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-04-24
Tamin'ny 17 Desambra 2020, notanterahina tamim-pahatokisana tao Shanghai ny tsingerintaona faha-50 niorenan'ny fifandraisana diplaomatika teo amin'i Sina sy itiopia. Amin'ny maha orinasa mpikambana ao amin'ny Chambre Commerce International an'ny Shanghai dia nasaina handray anjara amin'ilay hetsika ny orinasanay ....
UP Group atsy rehetra ao amin'ny pirinty Sina 2020
Ry namana rehetra, vita soa aman-tsara ny taona 2020 rehetra. Nandritra ny fampirantiana dia nahasarika ny sain'ny maro ny mpanonta pirinty nomerika sy ny fanapahana masinina, misaotra betsaka noho ny fahatongavanay. Fantatsika rehetra fa taona sarotra ny 2020, voninahitra lehibe ho anay ny fifanakalozana t ...
Masinina fanontana UV LQ6090 / 9060 UV
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-03-24
F1: Raha tsy te hampiasa ny lohan'ny pirinty XP600 ianao dia afaka manova azy ho lohan'ny pirinty indostrialy? A1: Ankehitriny, azontsika ampiasaina ny lohan'ny pirinty Ricoh sy ny loha fanontana Toshiba CE4. F2: Ahoana ny vokan'ny fanasitranana an'ny mpanonta anao? A2: Nanampy jiro UV tamin'ny andaniny roa amin'ny loha pirinty izahay, afaka mahasitrana haingana izy io. F3: Whe ...
Mpanonta T-shirt LQGA
F1: Mila haofaina amin'ny rano fitsaboana ve ny akanjo rehetra? A1: Ny T-shirt fotsy dia tsy mila hafafin'ny rano fanasitranana, fa ny loko mainty kosa mila toy ny: maintso, mena, mainty, sns. Q2: Afaka manonta lamba isan-karazany io ny mpanonta T-shirt? A2: Manonta printy T-shirt landihazo, avo kokoa ny ...
Ny mahasamihafa ny fanontana nomerika sy ny fanontana nentim-paharazana
Ny fonosana sy ny fanontana dia fitaovana lehibe sy fomba hanatsarana ny sandan'ny vokatra ary hanatsara ny fifaninanana. Amin'ny maha teknolojia fizotry ny fanaovana kopia sy lahatsoratra azy, dia nivoatra haingana niaraka tamin'ny fizotry ny haitao famokarana izy ary nanjary ampahany tena ilaina amin'ny fiainantsika. Ankehitriny ...
Famintinana ireo olana mahazatra amin'ny milina baoritra
F: 1. Inona no mahasamihafa ny mpanonta printy inkjet carton antsika sy ilay mahazatra? A1: Tsy mila manamboatra lovia isika ary manafangaro ranomainty toy ny fanontana nentim-paharazana. Ny ranomainty dia maintso sy tontolo iainana Q: 2.Inona no lohan'ny pirinty ampiasain'ny milina ary mandra-pahoviana ny androm-piainany? A2: Izy io dia mandray ...
Fampidirana ny vokatra RFID
RFID no fanafohezana ny mari-pamantarana ny radio matetika. Ny fotokevitra dia ny fifandraisana data tsy mifandray amin'ny mpamaky sy ny tag mba hahatratrarana ny tanjon'ny famantarana ny tanjona. RFID dia manana fampiharana isan-karazany. Fampiharana mahazatra amin'izao fotoana izao dia ahitana karazan-biby, chip misy fiara manohitra ny ...
ZH1000D fizahana gluer fampirimana mandeha ho azy
Tamin'ny novambra 10th, nitsidika ny orinasan-tsika fizahana ZH1000D AUTOMATIC FOLDER GLUER ny lefitra GM Andriamatoa Gao ary nanao resadresaka lalina tamin'ny teknisianina sy ny mpanjifa.
Andao hiara-hiady amin'ny COVID-19
Niverina niasa i Shina: Fambara fanarenana avy amin'ny Logonavirus Coronavirus: fironana tsara mitohy ho an'ny fitoeran'ny kaontenera dia maneho ny fahasitranan'ny Sinoa avy amin'ny Coronavirus ny indostrian'ny logistika. Tamin'ny herinandro voalohan'ny volana martsa dia 9,1% ny seranan-tsambo sinoa ...
Ny ekipa UPG dia nandray anjara tamin'ny Label Expo South China 2020
8 des-12th, ny ekipa UPG dia nandray anjara tamin'ny Label Expo South China 2020. Nandritra ny fampisehoana dia nanao fandalinana momba ny marika marani-tsaina sy ny fanontana avy amin'ny19 manam-pahaizana momba ny marika sy ny indostria izahay izay manazava antsika bebe kokoa momba ny fironana ho avy amin'ny fampandrosoana ny marika ary koa ny nomerika ...
UP Group dia nandray anjara tamin'ny China Plastics Expo natao tao Yuyao
China Plastics Expo (nohafohezina ho CPE) dia notontosaina tamim-pahombiazana nandritra ny 21 taona hatramin'ny 1999 ary nanjary iray amin'ireo fampirantiana malaza sy manan-danja indrindra amin'ny indostrian'ny plastika sinoa, ary nanome voninahitra ihany koa ny fanamarinana UFI tamin'ny 2016. Ity eny ...
Ho avy ny boky faha-8 rehetra ao Print China! Jereo eto amin'ny Booth: N3B331 & N2B433
Ny rehetra ao amin'ny Print China 2020 dia hatao mivantana ao amin'ny SNIEC, Shanghai, China 12-16 Oktobra, 2020. Ny rehetra ao amin'ny Print Cloud dia mampifandray ny fampisehoana, ny asan'ny matcha ary ny fifanakalozana indostrialy, izay natolotra saika, nanomboka ny 10 Aogositra Booth No. N3B331 fanontana nomerika milina ...